MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA PITTWEILER IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Taranka eeyga Pittweiler iyo Sawirada
Rottweiler / Pit Bull Terrier Isku-dhaf ah Eeyo
'Tani waa Achilles. Eygii wehelka badnaa ee ugu wanaagsanaa ee aan abid yeesho. Isagu waa iskutallaab udhaxeysa Pull Bull iyo Rottweiler. Waa mid firfircoon, kalgacal iyo caqli badan. '
Pitweiler-ka maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Rottweiler iyo Teri Bull Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Kane nooca isku dhafka Rottie / Pit Bull— Waa kan ninkeygii qurxoonaa ee haddana culeyskiisu yahay 75 rodol. Ha u oggolaan in wejigaasi ku khiyaaneeyo, wuxuu u macaan yahay sida indhihiisa malabkaas. Taasi waa ninka weyn ee mama !! '
'Kani waa Eygayga yar ee 2 bilood jira. Wuxuu ku qasan yahay Rottweiler iyo Pitbull. Hooyadiis waxay ahayd Pitbull dhiig buuxa aabihiisna wuxuu ahaa Jarmal Rottweiler oo dhiig buuxa leh. Waa eey aad u macaan oo firfircoon. Sawirkaan, wuxuu culeyskiisu ahaa 10 rodol.
Kira iskudhafka Rottweiler / Pit Bull (Pitweiler) da'da 2 sano
Hooska dhaji isku darka Rottweiler / American Pit Bull Terrier (Pitweiler) markuu jiro 7 bilood
Deva — hooyadeed waxay ahayd Termull Terrier-ka Mareykanka oo aabe ayaa ahaa Rottweiler .
Deva sida eey - hooyadeed waxay ahayd Termull Terrier-ka Mareykanka oo aabe ayaa ahaa Rottweiler .
Marble-keena waa 2-sano jir Godka Dibida Maraykanka / Jarmal Rottweiler isku dar. Isagu waa nin aad u jecel oo naxariis badan waana eey aad u deggan, laakiin wuu noqon karaa dawakhsan oo aan xasilloonayn mararka qaarkood . Wuxuu ka helaa ugaarsiga ugaadh yar sida bakaylaha iyo shimbiraha. Isagu waa eey weyn oo waardiye ah, waa nin aad u daacad ah oo adeecsan, jecel carruurta, aad ayuu ugu jilicsan yahay wax walba gaar ahaan waxyaabaha uu ku ciyaaro iyo xayawaannada buuran. Wuxuu jecel yahay inuu ordo oo ciyaaro dheeli inta uu kari karo, sidoo kale wuxuu jeclaaday Frisbee. Isagu waa eey aad u qurux badan oo leh caqli ay iswaafajiyaan. Isagu waa eeyga iyo wehelka ugu fiican ee aadamigu weydiisan karo. '
Dozer sidii eey - Waxaan haystaa eey runti qurux badan oo la yiraahdo Dozer. Isagu waa Qudhmiye Qudha. Hooyadiis ayaa buuxsantay Rottweiler aabbana wuu buuxaa Pitbull . Dozer runti wuu ku fiican yahay kuwa uu yaqaan laakiin wuxuu ka fogaadaa shisheeyaha. Mar haduu kula kulanto wuxuu noqon doonaa saaxiibkaa kuugu fiican !! Waa nin caqli badan, wuu yaqaan sida loo sameeyo fadhiiso , si fiican ugu soco xadhigga albaabkana ku sug oo wuxuu ku sugayaa inaad cuntadiisa dhigatid oo aadan taaban ilaa aad dhahdo hel. Dozer kaliya waa 14 toddobaad !!! '
Dozer sidii eey - 'Waxaan ugu yeernaa' RottenPit 'sababta oo ah wuxuu noqon karaa mid qurux badan markay yimaadaan, wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro labadiisa saaxiib ee ugu fiican Ladi, a Doberman iyo Jaxs, a Min Pin . Wuxuu nalala nool yahay gudaha annaga iyo asxaabtiisa kale ee bakhaarka ku seexda oo sariirta ayuu ku seexdaa. Dozer waa eey CAJIIB ah oo aan aad u jecel nahay isaga. '
Sawirada Pittweiler 1
Pyrenees weyn collie muqisho isku darka
basset sarkaal muqisho isku darka hound dahabka for sale
waa waxa eey corkie a